Apple inobvisa iyo 1 TB iCloud yekuchengetedza sarudzo uye inotipa 2 TB nemutengo mumwe chete | IPhone nhau
Zvakare uye senguva dzose, vakomana vanobva kuCupertino havana kuzivisa chero shanduko munzvimbo yemahara yekuchengetera inopihwa kune vese vashandisi vezvigadzirwa zvavo. Apple inotipa 5 GB yemahara nzvimbo muICloud, zvisinei nekuti tine 128 GB iPhone, kana kana tiine zvishandiso zvakati wandei zvinechekuita neakaundi imwechete, nzvimbo yatinogona kungochengetedza chinhu chimwe chete. Kana tichida imwe nzvimbo tinomanikidzwa kuenda kubudikidza nekutenga hongu kana hongu. Neraki, isu tinogara tichifanira kuona chimwe chinhu chakanaka mune izvi, Apple inopa yakakwikwidza mitengo uye kuhaya gore rekuchengetedza hurongwa hakusi kudhura.
Kusvika zuro, iCloud yakatipa matatu ekuchengetedza zvirongwa: 50 GB, 200 GB, 1 TB uye 2 TB, pamitengo ye0,99 euros, 2,99 euros, 9,99 euros uye 19,99 euros zvichiteerana. Asi nguva pfupi yapfuura hurukuro yakakosha Apple yabvisa imwe yeanozivikanwa zvirongwa zvekuchengetedza, iyo 1 TB ye9,99 euros, ichisiya chete iyo 50 GB, 200 GB uye 2 TB zvirongwa. Asi nhau dzakanaka dzinowanikwa mumutengo mutsva unopihwa neiyo 2 TB yekuchengetedza, kubvira Izvo chaizvo zvakafanana izvo zvaive zviripo kune 1 TB, ndokuti, 9,99 euros.
Iko kukurudzira kukuru kwekushandurwa uku kune chekuita nebasa idzva reIO iro inotibvumidza kugovana nzvimbo yekuchengetera nevamwe vashandisi vemhuri imwechete, yakasarudzika sarudzo uye kuti vazhinji vashandisi vaive vakamirira senge May mvura. Kana iwe uchida kuhaya iyi nyowani chirongwa, iwe unofanirwa kuenda kune iCloud sarudzo dzeiyo yako iOS kifaa uye tinya paTenga imwe nzvimbo. Aya marongero ekuchengetedza anobhadhariswa pamwedzi, saka unogona kuzvinyoresa chero nguva, kureva kuti, zvisati zvaitika uchafanirwa kugadzira kopi yekuchengetedza yezvinhu zvese zvawakachengeta muApple gore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Apple inobvisa iyo 1 TB iCloud yekuchengetedza sarudzo uye inotipa 2 TB pamutengo mumwe chete
luis suarez unopinza akadaro
Ini ndinofunga kuti izvo zvavaizofanira kuwedzera izvo zvavakaisa mahara ku10 Gb sezvo isu tichiishandisa kuita makopi emidziyo yavo, asi ini ndinofunga izvo hazvimbove chipo hachizi mavari ...
Pindura kuna luis suarez acute
Eulalio chaparro akadaro
Ndine iphone 6 S, ine iclou uye uchakwanisa kundiudza maitiro ekudzima iyo iclou uye kuvhura yangu iphone uye nekudaro kudzima iwo maakaundi apfuura uye kuisa account nyowani
Pindura kuna Eulalio chaparro